Tafaftiraha: Maareynta Suuq-geyn La-Isku-Geyn Karta | Martech Zone
Lacag ka sameynta waxyaabaha ku jira daabacaadda sida Martech waxay u baahan tahay xoogaa dadaal ah. Waxaan u adeegsanaa dhowr habab oo kala duwan, oo ay ku jiraan xayeysiinta lacagta lagu bixiyo ee shabakadeena xayeysiiska, iyada oo loo marayo Google Adsense, iyada oo loo marayo iskaashiyo iyo maalgelinno - iyo waliba iyada oo loo marayo suuqgeynta ku xiran.
Waa maxay Suuqgeynta Xiriirku?
Suuqgeynta gacansaarka ahi waa nooc ka mid ah suuqgeynta waxqabadka ku saleysan taas oo ganacsigu ku abaalmariyo mid ama in ka badan la-hawlgalayaal booqde kasta ama macmiil ay keeneen dadaalka suuqgeynta u gaarka ah.
Sidee ayey u shaqaysaa Suuqgeynta Shirkaddu?
Nidaamkii hore wuxuu ahaa inuu bixiyo koodh iib gaar ah ama noodh dhimis ah oo macaamilku ku khasban yahay inuu galo nidaamka hubinta si markaa shirkadda loo aqoonsado iib kasta. Si kastaba ha noqotee, suuqgeynta ku-xirnaanta khadka tooska ah waxay u shaqeysaa iyadoo la siinayo shirkad kasta oo leh lambar gaar ah oo raadraac ah oo ay uga faa'iideysan karaan xiriiriyeyaasha dhammaan boggooda. Marka akhristaha uu gujiyo xiriirintaas gaarka ah, macaamilka ayaa si otomaatig ah loola socdaa inta ay ku guda jiraan hawshooda iibsiga sidaa darteed isbahaysiga si otomaatig ah ayaa loo aqoonsan yahay.
Suuqgeynta gacansaarka waa habka ugu wanaagsan ee suuqgeynta alaabtaada maxaa yeelay waxaad ku bixineysaa oo keliya beddelidda… ma aha qasabno ama dareensiin. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad qof uun bixiso markaad si dhab ah u hesho iib! Adiguna sida caadiga ah ma bixisid iyaga illaa inta ugu horeysa ee lagaa bixinayo sidaa darteed ma jiraan arrin lacag-bixin ah, sidoo kale.
Maareynta barnaamijka isku-xirnaanta waxay noqon kartaa mid adag, in kastoo! La socoshada xisaabaadka, xiriiriyeyaasha, iibinta, iyo lacag-bixinta ayaa si dhakhso leh uga bixi kara xakamaynta iyada oo aan la helin nidaam maarayn suuq-geyn ah Taabo waa nidaam maareyn suuq-geyn gacansaar leh oo la awoodi karo. Oo malee maxaa jira? Taasi waa isku xirnaansho xiriiriye ka socda nidaamkooda ku xiran.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Tafaftirka
Isku-darka Tapfiliate adoo adeegsanaya mid ka mid ah modulladooda, hagitaan ama gacanta ku rakib.
Deji barnaamijkaaga ku-xirnaanta iyo qaab-dhismeedka guddiga.
Kudar boorar iyo xiriiriyeyaal qoraal ah xiriiriyeyaashaada inay adeegsadaan.
La wadaag url-ka martiqaadka barnaamijkaaga si aad ugu darto xiriiriyeyaasha barnaamijkaaga.
Maaree oo falanqee aragtiyaha, qasabadaha, beddelaadyada, CTR, CVR, joornaal-qaybinta, iwm.
Arag oo ansax boggaga xiriirka.
Xitaa ka sii fiican, Taabo horeyba waxay u laheyd tiro isku dhafan, oo ay ku jiraan Magento, Prestashop, Shopify, WordPress, WooCommerce, Ecwid, Big Commerce, 3dcart, iyo Hikashop.
Tags: 3dcartmarketing affiliateGanacsiga BigEcwidHikashopmagentoPrestaShopdukaankataabashowaa maxay suuq geyntawoocommerceWordPress
4 Fure si aad u guuleysato Istaraatiijiyaddaada Muuqaalka Bulshada
Nov 20, 2014 at 5: 21 AM
Waan oggolahay baahida loo qabo nidaamka suuq-geynta ku-xirnaanta. Waad ku mahadsantahay qaybta.
Jun 26, 2015 saacadu markay ahayd 5:46 AM
Waa salaaman tahay tafiliiye ereyga qoraalka?